9 munyika gumi dzemu Africa dzakarasikirwa nechinangwa chekudzivirira cheCOVID-10
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » 9 munyika gumi dzemu Africa dzakarasikirwa nechinangwa chekudzivirira cheCOVID-10
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nyika makumi mashanu neshanu dzemu Africa dzakanyoresa hutachiona hunosvika mamirioni mashanu eECOVID-54 kusvika pari zvino uye huwandu hwakawedzera nechingangoita makumi maviri muzana - kusvika pamusoro pe19 20 - muvhiki inopera 88 Chikumi.
Inoita kana kufa pane kugoverana kwedosi kuAfrica
Mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri nemashanu emiyero yemishonga inodiwa nekukurumidza pakondinendi
Vaviri chete muzana yevanhu vemuAfrica vangangoita 1.3 bhiriyoni vakagamuchira dosi imwe
Pamamiriyoni makumi matatu nemaviri emadhizaini, Africa inoverenga isingasviki muzana muzana yematanho anodarika 32 bhiriyoni anotarisirwa pasi rose. Vaviri chete muzana muzana yekondinendi vanhu vangangoita 2.1 bhiriyoni vakagamuchira muyero mumwe, uye chete mamirioni 1.3 evaAfrica ndivo vakabaiwa zvizere.
'Ita kana kufira' for doses
"Ndoita kana kufa nekugovana mu Africa," akadaro Dr Matshidiso Moeti, World Health Organization (WHO) Dunhu Director we Africa.
Chiyeuchidzo cheWHO chekuti mazana maviri nemakumi maviri nemashanu emadhiza emishonga ekudzivirira anodiwa nechimbi chimbi mukondinendi inouya sezvo hutachiona hwecoronavirus hwakawedzera ipapo kwevhiki rechitatu rakateedzana.
Yechitatu wave inosimuka
"Sezvatinopfigira mumamiriyoni mashanu emakesi uye wave wechitatu muAfrica wasvika, vazhinji vevanhu vedu vanotambura vanoramba vakatarisana neCOBV-19 zvine njodzi", vakayambira Dr Moeti.
"Mishonga yekudzivirira zvirwere yakaratidza kudzivirira chirwere nekufa kwevanhu, saka nyika dzinogona, dzinofanira kugoverana majekiseni eECVID-19."
Zvinoenderana neazvino mamiriro ezvinhu eWHO, denda iri "riri kukwira kumusoro munyika gumi dzeAfrica". Nyika ina dzakaona 10 muzana muzana yezviitiko mumazuva manomwe apfuura, zvichienzaniswa nesvondo rapfuura.
Mazhinji emakesi matsva aive muEjipitori, Chamhembe Afrika, Tunisia, Uganda neZambia uye anopfuura hafu aive munyika pfumbamwe dzekumaodzanyemba kweAfrica.
Mishonga yekudzivirira zvirwere yave "kuwedzera kushomeka", rakadaro sangano rehutano reUN, richiwedzera kuti pachiyero chiripo chekutakura, nyika nomwe chete dzemu Africa ndidzo dzichazadzisa chinangwa chekudzivirira mumwe muvanhu gumi muna Gunyana.